N'ikpeazụ ụdị nke WhatsApp nwere oku vidiyo 8 bịara na ụbọchị | Gam akporosis
Bọchị iri gara aga anyị mụtara na WhatsApp bụ na-abawanye ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ site na 4 ruo 8 na oku vidiyo. A mmelite nke ọrụ WhatsApp na ndị 8 sonyere na nke ahụ na-abịa na oge ndị a mgbe onye ọ bụla na-eji Mbugharị; a ọrụ na nnọọ nso nso bụ fọrọ amaghị na nke nwere ike ịhapụ nke a maara nke ọma na ha ogologo ọkpa ala.
WhatsApp, dị ka telegram, ọ chọghị igbu oge na-enyekwa ahụmahụ nke Mbugharị na-enye, ọ bụ ezie na e nwere ụfọdụ atụmatụ na ọ nwerebeghị; ọ bụ ezie ee ee nwere emelitere iji tinye ndị ọrụ dị ka Mbugharị na-eme.
N'ezie awa ole na ole gara aga WhatsApp ekwuputala na olu na vidiyo na-akpọ ndị ruru asatọ na-eru maka ụdị nke ikpeazụ, nke a ga - emelite site na Playlọ Ahịa Google Play.
Oke nke ndị nsonye 8 nke ị nwere ike ịba ịbịaru nso na mbipute 2.20.143 nke beta nke ahụ na-enye gị ohere isoro ndị ị hụrụ n'anya oge ndị ahụ ị ga-anọ n'ụlọ mkpọrọ. Nanị nkwarụ ka ị nwee ike ịkpọ oku vidiyo na ndị 8 so na ya bụ na onye ọ bụla n’ime ha kwesịrị ịnwe ụdị beta ahụ maka oku vidiyo ka ọ rụọ ọrụ.
Ma ọ bụghị ya, ọ gaghị ekwe omume, ọ dị ka ọ siri ike gwa onye ezinulo anyi ka o budata apk a ma ọ bụ gaa na peeji nke ngwaahịa iji denye aha na beta; maka nke a anyị na-akwado Mbugharị na a nnọọ mfe nkuzi ịbanye video oku.
A nnọọ kemmasi oge n'ihi Mbugharị enwewo ike ịhapụ video ọkpụkpọ ọrụ site na ụlọ ọrụ dị ka WhatsApp, Microsoft na Google. Anyị nwere ike igwu ihe nwere ezigbo ọgụ dị n'etiti ndị njikwa mgbe enweghị ike ịghọta ihe na-abịa na oku vidiyo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » WhatsApp malitere ntinye nke 8-oku vidiyo